Daty mety hanombohana ny Apple Watch any Espana | Avy amin'ny mac aho
Mandrosoa, andao ary!
Ny tsaho sy ny antsipiriany voalohany momba ny fahatongavan'ny Apple Watch any Espana sy ny sisa amin'ireo firenena izay tsy ahafahana mitahiry azy amin'izao fotoana izao dia manomboka miroborobo amin'ny tambajotra. Amin'ity tranga ity dia voalaza fa ny fiandohan'ny onja faharoa amin'ny famandrihana sy ny fividianana ny famantaranandro marani-tsaina an'ny zazalahy Cupertino, Tonga amin'ny 8 Mey izao.
Tsy midika izany fa marina, lavitra azy, saingy mazava fa ny masin'i Apple dia tsy mijanona mandritra ny iray segondra ary tonga ny tsaho momba ny fizarana andiany faharoa rehefa tonga ny datin'ny fanaterana voalohany ho an'ireo izay efa nitahiry ny finday.
Ny zavatra lojika dia ny Apple manomboka ny famandrihana an'ity Watch ity faran'izay haingana ho antsika izay ao amin'ny onja fanaterana faharoa ary toa hitovy amin'ny hitantsika hatramin'ny androany ny zavatra rehetra, izany hoe, ny fomba hahazoana Apple Watch dia hitovy tanteraka noho ny tany amin'ny firenena voalohany.
Manantena ny fanamafisana na ny fivoahana mety amin'ny fomba ofisialy bebe kokoa izahay hanamafisana an'io daty io, fa amin'izao fotoana izao dia tsy afaka milaza izahay fa ny 8 Mey no daty nofidian'i Apple, daty azo atao io. Fotoana izao hiaretana hatrany, saingy mihena hatrany no ilaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Daty famandrihana mety ho an'ny Apple Watch any Espana
Ahoana no hivoahan'ny sary amin'ny sary rehetra, ny haben'ny famirapiratana ao amin'ny toerana kely toy izany ... Heveriko fa raha manakaiky azy ianao dia misy zavatra mamirapiratra mamoaka ny famirapiratana ary mamela azy matte ...
Fehezo ny famelabelaranao Keynote amin'ny Apple Watch